मोदीका अगाडि आफ्नो बेइज्जत गरेको भन्दै ओलीले मुख्यमन्त्री लालबाबुलाई यसरी झपारे ! — Sanchar Kendra
मोदीका अगाडि आफ्नो बेइज्जत गरेको भन्दै ओलीले मुख्यमन्त्री लालबाबुलाई यसरी झपारे !
भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीका अगाडी आफ्नो बेइज्जत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई अप्रत्यक्षरुपमा झपारेका छन् ।
नागरिक अभिनन्दनका क्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मर्यादा, कूटनीतिक मर्यादाको कसीमा कमजोर र अनुपयुक्त भएको बताएका छन् ।
हतियारधारी भारतीय कमाण्डोहरू जनकपुरदेखि काठमाडौं हुँदै मुक्तिनाथसम्म खटाएर सार्वभौमसत्ता राष्ट्रको धज्जी उदाएका ओलीले मोदीका सामु मुख्यमन्त्रीले बेइज्जत गरिदिएपछि उनी जंगिएका हुन् ।
शुक्रबार जनकपुर आएका मोदी लाई प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भारत सरकारबाट आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।
उनले मोदीले तेस्रो पटकको नेपाल भ्रमण जनकपुरबाट प्रारम्भ गरी सद्भाव प्रकट गरेको भन्दै आभार व्यक्त गरेका थिए । साथै मुख्यमन्त्री राउतले मोदीका अगाडि धेरैजसो मधेसी जनता गरिब रहेकाले प्रदेश २ ले विकासका लागि भारतलाई आग्रह गरेको बताएका थिए ।
उनले मोदीका अगाडि संविधानको बारेमा पनि विवादस्पद अभिव्यक्ति दिए । उनले संविधानलाई ‘विभेदकारी’ भन्दै संविधान र प्रादेशिक अधिकारका लागि संघर्ष जारी रहेको बताएका थिए ।
एक अर्को प्रसंगमा ओलीले आफु छिट्टै चीन भ्रमणमा जाने बताएका छन् ।उनले भने, ‘सायद म छिट्टै चीन भ्रमणमा जानेछु ।’ तर, चीन भ्रमण कुन मितिमा हुने भन्ने प्रधानमन्त्रीले खुलाएका छैनन् ।